उबेर पहिले स्वायत्त कारहरु संग संघर्ष गरेको थियो ग्याजेट समाचार
ईडर एस्टेबान | | हाम्रो बारेमा, प्रविधि
घातक Uber कार यस हप्ता अधिक रन अभी भी हेडलाइटहरू बनाउन। यो दुर्घटनाले देखाउँदछ कि स्वायत्त कारहरूमा अझै सुधार गर्न बाँकी छ। थप रूपमा, यस घटनाले कम्पनीलाई फेरि स्पटलाइटमा राख्छ। किनभने यस्तो देखिन्छ कम्पनीले पहिलेको जानकारी लुकाएको छ जुन महत्त्वपूर्ण छ।
एरिजोना राज्य, जहाँ घातक आक्रोश भएको थियो, Uber ले अनुसन्धान गरिरहेको छ। तिनीहरूले पत्ता लगाए कि कम्पनीले स्वायत्त कारको साथ अघिल्लो घटनाहरू भइरहेको छ। तिनीहरू पहिले नै थियो दुर्घटना हुनु भन्दा पहिले अभावहरू रेकर्ड गरियो। तर यी घटनाहरू कसैलाई बताइएको थिएन।
स्पष्ट रूपमा न्यु योर्क टाइम्स मा पहुँच भएको छ १०० पृष्ठ रिपोर्ट उबरको स्वायत्त कारहरूले भोग्ने समस्याहरू देखाउँदै। स्पष्ट रूपमा यी कारहरू थिए वस्तु पहिचान गर्न समस्या वा सडक चिन्हहरू। केहि समस्याहरू जसले उसको ड्राइभिंगमा उल्लेखनीय रूपमा असर गर्‍यो र त्यसले गम्भीर समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ।
तिनीहरू विशेष गरी समस्याहरू थिए जब तिनीहरू ठूला कारहरूको छेउमा वा निर्माण क्षेत्रमा उभिरहेका थिए। वास्तवमा, आपतकालीन चालकहरूले घटनाहरू जोगिन हस्तक्षेप गर्नुपर्‍यो। पक्कै पनि त्यहाँ उबरको सेल्फ ड्राइभि cars कारहरूमा केही गडबडी छ।
उदाहरण को लागी, गुगल कारहरू ,9.000,००० कि.मी. हस्तक्षेप गर्न आपतकालीन ड्राइभरको आवश्यकता बिना नै। तर उबरको सन्दर्भमा तिनीहरूले चालकको कुनै पनि हस्तक्षेप बिना मुश्किल १ 13 किलोमिटर पार गर्न सकेका छन्.
थप रूपमा, दुर्घटनाको भिडियोको प्रकाशन जसमा हेर्नुहोस् कि चालक कडा हिसाबले सडकमा हेर्छ, विवाद खडा गरेको छ। जस्तो कि यसले हाईलाईट गर्दछ कि कारमा दुई व्यक्ति आवश्यक छ समस्याहरूबाट बच्न। उबरले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया देखाएको छैन। तर कुनै श doubt्का बिना, कम्पनी फेरि विवादको केन्द्रमा छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » हाम्रो बारेमा » उबरसँग दुर्घटना हुनुभन्दा पहिले नै यसको स्वायत्त कारहरूमा समस्याहरू थिए
एउटा क्र्यास गरिएको कम्प्युटरले सुनको लगभग 400०० मिलियन डलर शून्यतामा खस्काउँछ